Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज वि.सं. २०७५ पौष १५ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस - Pnpkhabar.com
आज वि.सं. २०७५ पौष १५ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस
वि.सं. २०७५ पौष १५ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ डिसेम्बर ३० तारिख, आजको चाडपर्व र उत्सव : तमु ल्होत्सार, भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), पौष कृष्णपक्षको अष्टमी तिथि, बिहान ०७:०२ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि, हस्ता नक्षत्र, दिउँसो ०१:०३ बजेसम्म, त्यसपछि चित्रा नक्षत्र, आजको चन्द्रमा कन्या राशिमा, मध्यरात्रीपछि १२:३९ बजेसम्म, त्यसपछि तुला राशिमा, शोभन योग, दिउँसो ११:४५ बजेसम्म, त्यसपछि अतिगण्ड योग, सुरुमा कौलव करण बिहान ०७:०२ बजेसम्म, त्यसपछि तैतिल करण साँझ ०६:१९ बजेसम्म, अन्तिममा गर करण, काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५५ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१७ बजे
आजको राहु काल, यमघण्ट र गुलिक काल :– राहु काल : साँझ ०३:५९ देखि ०५:१६ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो १२:०६ देखि ०१:२४ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ०२:४२ देखि ०३:५९ सम्म , आजको वारवेला :– उद्वेग वारवेला : बिहान ०६:५५ देखि ०८:१३ सम्म, साँझ ०३:५९ देखि ०६:५९ सम्म र मध्यरात्रीपछि ०५:१३ देखि ०६:५५ सम्म, शुभ वारवेला : दिउँसो ०१:२४ देखि ०२:४२ सम्म र बेलुका ०६:५९ देखि ०८:४२ सम्म, अमृत वारवेला : दिउँसो १०:४८ देखि १२:०६ सम्म र बेलुका ०८:४२ देखि १०:२४ सम्म, चर वारवेला : बिहान ०८:१३ देखि ०९:३१ सम्म र बेलुका १०:२४ देखि १२:०६ सम्म, रोग वारवेला : दिउँसो ०२:४२ देखि ०३:५९ सम्म र मध्यरात्रीपछि १२:०६ देखि ०१:४८ सम्म, काल वारवेला : दिउँसो १२:०६ देखि ०१:२४ सम्म र मध्यरात्रीपछि ०१:४८ देखि ०३:३१ सम्म, लाभ वारवेला : बिहान ०९:३१ देखि १०:४८ सम्म र मध्यरात्रीपछि ०३:३१ देखि ०५:१३ सम्म
आज कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) र वायव्य (उत्तरपश्चिम) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने पान वा घिउ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
सन्ततिका क्रियाकलापमा सामान्य समस्या देखिन सक्छन । जानकार व्यक्ति वा गुरुजनले सहयोग गर्नाले आत्मबल बढ्ने छ । बन्दव्यापारबाट लाभ नै हुनेछ । पठनपाठन र चिन्तनमननमा ध्यान केन्द्रित हुनसक्छ । पारिवारिक सहयोग र सद्भावमा कमी आए पनि आफैंले गरेको निर्णय फलदायी हुनेछ ।
एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारमा सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । घरपरिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । प्रणयसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिने छ ।
राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिनसकिने छ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । वैदेशिक व्यापार, कृषिव्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहने छ । आम्दानीमा कमी आउने छैन । अरुको भलाइका लागि दौडधूप गर्नु पर्नेछ । यात्राको सम्भावना छ ।
राम्रो/नराम्रो दुबै खालका परिणाम प्राप्त हुनेछ । वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका सानातिना फुटकर कामका लागि राम्रो समय छ, तर दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि अहिलेको समय सकारात्मक देखिंदैन । दैनिक आम्दानीका मार्गमा बृद्धि हुनेछ, तर मानप्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउने सम्भावना छ । घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालायित हुनेछ ।
व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनु पर्नेछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ । दानपुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ । घरपरिवारबाट साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्, तर मन दोधार नबनाउनु होला, नत्र तपाईंले तिनलाई पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुहुन्न । स्वास्थ्य अनुकूल हुनेछ । मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन् । लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धननिवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ ।
सानातिना सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना छ । दूरदराजबाट प्रसन्नता र खुसीको समाचार आउन सक्छ । परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ । रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउने सम्भावना छ, यद्यपि आज आर्थिक समस्या हल गर्ने उपाय देखा पर्नेछ । ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर धनलगानी गर्नु राम्रो हुनेछैन ।
मन फुरुङ्ग हुनेछ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमा फाइदा हुनेछ । शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक/सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउने छन् । लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । व्यवसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने योग छैन । आम्दानीमा कमी आउने छैन । गर्नैपर्ने काममा समेत जाँगर चल्ने छैन, यद्यपि बन्दव्यापारमा बेफाइदा हुँदैन । पारिवारिक चाप बढ्नाले काममा बाधा पुग्नसक्छ । नयाँ पेसा र बन्दव्यापारमा लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बढ्ने छ ।
अध्यात्म र दर्शनप्रति मन आकर्षित बन्न सक्छ । परोपकारी विचार आउन सक्छन्, त्यस्तै प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक/सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । सार्वजनिक हीतका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ ।
झिनामसिना र सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुनेछ । तपाईंका बानीब्यहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ । उपलब्धीमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ, तर बाटो काट्दा वा गाडी हाँक्दा लापरबाही नगर्नु होला ।
प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पन्न हुनेछ । सरकारी जागिरेले बढुवा, प्रशंसा र पुरस्कार पाउन सक्छन् । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । कतै छोटो दुरीको लाभदायी यात्रा पनि हुन सक्छ । पारिवारिक जीवनमा रमाइलोपना आउने छ । घरायसी काममा समय र धन खर्च हुनेछ ।
आज वि.सं. २०७७ साउन २६ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज वि.सं. २०७७ साउन २५ गते आइतवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज वि.सं. २०७७ साउन २४ गते शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज वि.सं. २०७७ साउन २३ गते शुक्रवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज वि.सं. २०७७ साउन २२ गते बिहीवारको राशिफल हेर्नुहोस्